Ntụle maka iwuli Vs yingzụta MarTech | Martech Zone
Ajuju ma iwu ma ọ bụ zụta ngwanrọ bụ arụmụka na-aga n'ihu n'etiti ndị ọkachamara nwere echiche dịgasị iche na ịntanetị. Nhọrọ iji wulite ngwanrọ nke ụlọ gị ma ọ bụ zụta ahịa dị njikere ahaziri azịza ka na-eme ka ọtụtụ ndị na-eme mkpebi nwee mgbagwoju anya. Na ahịa SaaS na-abawanye na ebube ya zuru oke ebe atụmatụ ahịa ga-eru USD 307.3 ijeri na 2026, ọ na - eme ka ọ dịrị ndị ụdị mfe ịdenye aha ha n’ọrụ n’enweghị mkpa iji jigide ngwaike ma ọ bụ ihe ndị ọzọ.
Tupu anyi agbaba n'ime arụmụka nke iwulite ihe anyị zụta, ka anyị nyochaa etu omume ndị ahịa na ụzọ ịzụta siworo gabiga mgbanwe.
Ntughari dijitalụ nwere ndị ahịa nwere smartphones, mbadamba na ndị ọrụ taa na-achọ ma na-atụ anya ọrụ, si otú a na-ahazi onyinye ngwaahịa ha na-eri. Oge agafeela nke akara na-ekwupụta ma na-emetụta atụmanya ndị ahịa. Ọ bụ ezie na ike gwụrụ nhọrọ na ọchịchị aka ike nke nhọrọ emetụtala usoro ịme mkpebi, ọnụahịa nyocha ọnụahịa, yana olu nke ndị isi okwu echiche (KOLs) na ndị na-eme ihe ike, na-enyere ndị ọrụ aka ịzụrụ ihe ọmụma.
Pzọ Modernzụta Oge A
Mgbanwe nke ike dị n'etiti ndị ahịa na ụdị emezigharị ụzọ ịzụ ahịa ọdịnala. Purchasezọ ịzụta ọgbara ọhụrụ, nke ọganihu teknụzụ na ọtụtụ ozi sitere na ya, ebupula ngwaahịa site na shelf ụlọ ahịa ma tinye ha n'ime usoro okike dijitalụ, na-agafe ihe mgbochi ala iji mee ka azụmahịa ghara inwe nsogbu na nghọta.
Isi Iyi: Ntuziaka MoEngage Buyer na Njikọ Aka Ahịa
Ihe onyonyo a dị n’elu na-egosi etu ụzọ njem ndị ahịa siri gafere site na mgbanwe mgbanwe dị ukwuu, nke gbanwere mmekọrịta ndị ahịa na-enye site na ọkọnọ a chụpụrụ ka achọọ ya.
N'ịtụle ihe ndị a dị n'elu banyere otu ụdị si eme ka ndị ahịa bụrụ ndị ahịa ha na-arụ ọrụ, ọ dịwanye mkpa iji dozie nsogbu ịzụ ahịa zụta. Ma ọ bụghị nke ahụ kwụ ọtọ. Tupu ị na-ekpebi ma ọ ka mma iji wuo ikpo okwu site na ncha ma ọ bụ nweta teknụzụ dị, lee ụfọdụ ihe ị kwesịrị ịtụle:
Ego metụtara ma ọ bụ ịzụ: Iwulite ihe site na ncha ga-abụ nnukwu dabere na nha ndị otu / ụlọ ọrụ na ị ga-achọ ịkọ maka oge mmadụ, akụrụngwa, na mmezi ego, ihe niile siri ike ịkọwapụta. Ka ọ dị ugbu a ịzụta ihe ngwọta iji gboo mkpa dị iche iche n'ime otu, onye nwere ike ịchọrọ ịtụle ụgwọ ikike nke dịgasị iche dabere na ọnụọgụ ndị ọrụ na ọrụ ejiri.
So ihe ize ndụ mgbe ị na-azụ ma ọ bụ na-ewu ụlọ: Isi ihe egwu dị na ịzụta bụ oke njikwa na ịnweta ngwanrọ, koodu isi, na ahụhụ, ka ọ dị ugbu a na ịmepụta ihe bụ isi ihe egwu dị na ikike ịnapụta site na ndị otu mmepe nke nwere ike ibute mmefu na-arịwanye elu.
Edozi nsogbu a site na azịza ya: Ọ baghị uru ịnagide nsogbu nke iwulite ihe pụrụ iche na ọkọ ma ọ bụrụ na ọ gbakwunyeghị na ala gị. A na-adụkarị gị ọdụ ịzụta ihe ụlọ ọrụ ọ bụla chọrọ ma wuo ihe dị iche na gị.
Egwu ndekọ nke otu mmepe: Tụọ otu ndị otu mmepe gị tozuru etozu na ntozu etozu, ịdị gara gara, na ike ịnapụta. Ọ bụrụ na ha ruru ogo dị mma, mgbe ahụ nrụpụta ngwanrọ n'ime ụlọ na-eme ka nwekwuo uche ma e jiri ya tụnyere ịzụta azịza ahịa dị njikere.
Ihe eji enyere gi aka: Mmefu ego bụ nnukwu ikpebi ihe mgbe ọ na-abịa ịzụta vs arụmụka arụmụka. N'ihe dị elu nke imefu ego nke ụdị, ọ na-enye iwuli software ahụ ka amara. Maka ụlọ ọrụ ndị nwere obere mmefu ego, ịzụta ihe ngwọta bụ ụzọ dị mfe iji dozie nke a.
Oge a chọrọ n'ahịa: Otu n'ime ihe ndị kachasị mkpa ị ga-atụle bụ ịzụta azịza bụ atụmatụ ịga ahịa ahịa ngwa ngwa n'ihi na enwere ike wepụta ya n'ime izu asatọ na iri na isii (dabere na mgbagwoju anya nke iji ihe eji eme ihe) jiri ya tụnyere ọnwa ma ọ bụ afọ ọ nwere ike were wuo ikpo okwu n’ime ulo.
Ihe mbu nke ahia gi: Ọ bụrụ na ị wuru ngwọta nke gị n'ime, ọ ga-abụ ihe kacha mkpa na azụmaahịa gị? Eleghị anya ọ bụghị, nke nwere ike iduga ya ka ọ bụrụ onye na-egbochi ya inwe ọganihu ma ọ bụrụ na ụlọ ọrụ gị enweghị ike ịga n'ihu itinye ego na ya. Teknụzụ dị na mgbanwe mgbe niile, ọ bụghị ọrụ emere eme. Otu ụlọ ọrụ na - ewepụta azịza ị ga - azụta dabere na azịza ahụ na - agbanwe ma na - aga n’ihu na - enye ndị ahịa ya uru.
Mmadu kwesiri igbusi igbu oge na iwu ulo na imeputa ihe ewubere nke ọma na ahia. Ebumnuche njedebe maka ụdị bụ inye ndị ahịa ahụmịhe kachasị mma ma ọ bụrụ na teknụzụ nke dị adị na-ebute nke ahụ, mmadụ kwesịrị itinye oge na ume dị ukwuu iji dozie nsogbu ahụ?
Ihe kachasị mkpa maka ụlọ ọrụ nwere ike ịbụ nrụgide ahụmịhe nke ụmụ mmadụ na-enye n'akụkụ ọ bụla metụtara ndị ọrụ ma melite nkwado na ọrụ ndị ahịa ha. Ọdịiche na-ebuwanye ibu nke dị n’etiti atụmanya ndị ahịa na ikike nke ika iji mezuo ha bụ otu n’ime nsogbu ndị kachasị ndị njikwa oge a na-achọ idozi. Iji ghọta otú atụmanya ndị ahịa si gbanwee, ọ dị mkpa ka ị mara mgbanwe nke ọrụ na omume yana otu ha si emetụta mkpebi ịzụta.
Tags: mmekọrịta ikawuo ihe zuoiru vs zụtanjem ndị ahịaahịa ndụdevelopmentabụrụ teknụzụna-ụlọteknụzụ ahịankatankà na ụzụ ochienke ochiezuo uzoTechnology
Rayaprolu na -adịghị ahụkebe